शिवरात्रिको लागि पशुपतिमा विविन्नथरीका बाबाहरुको उपस्थिति , - Nepal Bizz
Posted on ८ फाल्गुन २०७६, बिहीबार २२:०८ Author admin	Comment(0)
काठमाडौं । भस्मेश्वर घाटको पारिपट्टि चन्द्रशिवालय क्षेत्रमा बाहिरबाट आएका झण्डै दुई दर्जनजति साधुहरु सुतिरहेका छन् । केही साधुहरु मध्यदिनमा धुनी तापेर गाँजासँगै रमाइरहेका छन् । कोही साधुचाहिँ पशुपति क्षेत्रमा बञ्चरोले रुख ढालिरहेको अवस्थामा पनि भेटिए ।
चारैतिर रमितेहरुको भीड छ । छिनछिनमा छेवैमा रहेका एक साधु झट्ट रिसाउँछन् । ‘जुत्ता लगाएर धूनी टेक्न आउनी ? केको रमिता हो ?’ हिन्दी भाषामा उनको गर्जन सुनेपछि एकाएक सबैको सात्तो जान्छ । केही पछि हट्छन् । एकछिनपछि फेरि पुरानै अवस्था ।
शिवरात्रिको दुई दिनअघि पशुपतिको भष्मेश्वर घाटको सम्मुखमा रहेको सो शिवालय क्षेत्रमा बाहिरबाट आएका पाहुना साधुहरुले खचिखचाउ भएको छ । त्यही भीडबाट एक साधुले साँझ प्रसाद खान आउने निम्तो दिन्छन् । अर्का साधु आफूले भस्म नदलेको भन्दै फोटो खिच्न इन्कार गर्छन् । यसरी नै चलिरहेको छ शिवरात्रिपूर्वको पाशुपत क्षेत्रको अवस्था ।
साधुहरुको हरेक गतिविधिमा अमूर्त सम्पदाको झल्को पाइन्छ । त्यही गतिविधिले रोमाञ्चक बन्छ पशुपतिको माहोल । दिनभरि चिरनिद्रमा हराउने र रातभरी साधनामा लिप्त हुन्छन् वास्तविक अघोरी एवं साधकहरु । अरुको भने हामीहरुको जस्तै सामान्य जनजीवन हुन्छ भने केहीको मागिखाने भाँडो हो– पशुपतिको जात्रा ।
दुईदिन अघिदेखि नै सो क्षेत्रमा आउने साधकहरुले भाङ, धतुरो र गाँजाहरुको अर्डर लिन सुरु गरिसकेका छन् । फाल्गुन महिनाको मध्यान्हमा लागेको घामले गर्मी सुरु हुन लागेको संकेत गर्दैछ । तर, कसैलाई पनि गर्मीको महसुस भएको देखिँदैन । यस्तै थरिथरिका साधकहरुको गतिविधिसँगै शिवरात्रिको गतिविधि बढ्न थालेको छ, पशुपति क्षेत्रमा ।
आर्यघाटमा बलिरहेको शवबाट निस्किएको सल्फर डाइअक्साईड युक्त गन्धले मन्त्रमुग्ध भएका नाथ सम्प्रदायका अघोरीहरु मध्यदिनमा बाक्लो च्यादर ओढेर आफ्नो थकान मेटिरहेका छन् । ‘रातमें भगवानका स्तुति करना है । अभि मुझे सोने दो ।’ पशुपतिको यात्राबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा एउटै वाक्यमा उत्तर दिएर अर्काे पट्टि फर्किए भस्मेश्वर घाटको ठीक सम्मुखमा भेटिएका एक अघोरीले ।
पशुपतिमा आएका केही साधुहरुलाई यात्राको बारेमा कुराकानी गर्दा धेरै भारतका विभिन्न प्रान्तहरुबाट आएका साधकहरु भेटिन्छन् । नाथ, अघोर, कापालिक जस्ता सम्प्रदायमा आवद्ध भएका साधकहरुले आफ्नो सम्प्रदायका साधुहरुको पहिरन र व्यवहारमा नै उनीहरुको परिचय भेटिन्छ । अघोरीहरु प्रायः अरुसँग धेरै कुराकानी गर्न रुचाउँदैनन् । उनीहरु केही समय शयन गर्छन् भने बाँकी समय साधनामा नै समय बिताउँछन् । उनीहरुको साधना विशेषगरी राति धेरै चल्ने गरेको उनीहरु बताउँछन् ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अनुसार यो वर्ष मात्रै पाँचदेखि छ हजारको हाराहारीमा विभिन्न सम्प्रदायका साधकहरु पशुपति आउने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि अहिलेसम्म भने आधा पनि साधकहरु आएका छैनन् । बाहिरबाट आएका साधकहरुको लागि खान र बस्नको लागि चन्द्र शिवायल क्षेत्रमा नै व्यवस्थापन मिलाइएको पशुपति क्षेत्रविकास कोषले जनाएको छ ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडाले यो वर्ष स्वदेशी र विदेशी गरी करिब २० लाखको हाराहारीमा दर्शनार्थीहरु आउने अपेक्षा राखिएको बताए । यो वर्ष सुरक्षा र व्यवस्थित रुपमा दर्शनार्थीहरुले दर्शन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताए ।
उनले अतिरिक्त शुल्क तिरेर सिधै दर्शन गर्न पाउने व्यवस्था हटाइएको भन्दै यो वर्ष व्यवस्थापनमा समस्या भयो भने पूर्वीद्वार समेत खोलेर भएपनि दर्शन सहज गराइने उनले बताए ।
शिवरात्रि मेलामा भ्रमण वर्षको प्रचार
शिवरात्रिको दर्शन गर्न जानेहरुलाई लक्षित गर्दै भ्रमण वर्षको समेत विज्ञापन गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक खतिवडाका अनुसार भ्रमणवर्ष २०२० चलिरहेको परिप्रेक्षमा यो वर्ष शिवरात्रि मेलालाई पनि भ्रमणवर्षसँग जोडिएको छ ।
विष्णुको भक्तलाई शिवरात्रिको माहोल
हातमा श्रीरामको नाम लेखिको बाला, शिरमा नारायण र विष्णुको नाम अंकित काठैकाठले बनेको टोपीमा सजिएर एक साधु क्यामेराको नजिक आए । उनी आफूलाई श्रीरामका भक्त भन्न रुचाउँछन् । तर, शिवरात्रि मनाउनको लागि अहिले पशुपति क्षेत्रमा आएको बताउने उनी आफू शिवको समेत अनुयायी रहेको बताउँछन् । तिनै ‘रामभक्त’ साधक पशुपतिमा आकर्षणका केन्द्र थिए । भस्म दलेर पशुपतिमा बाबाहरु विष्णुका भक्त हुनु धेरैको लागि अचम्मको विषय बन्नसक्छ । तर, उनी भने शिरमा श्रीरामको नाम राखेर शिवको आराधना गर्न पशुपति आएको बताउँछन् ।
पशुपति क्षेत्रमा एक जना जोगी काँचो रुखमा बन्चरो हानिरहेका थिए । अर्का अर्धनग्न जोगी छेउमा उभिएर हेरिरहेका थिए । हामीले किन रुख काटेको बाबाजी भनेर सोध्यौं । उनले भाइ यो फोटो मेरो ह्वाट्सएपमा पठाइदिनू है भन्दै भारतीय मोबाइल नम्बर थमाए ।
अयोध्याको अखडाबाट पशुपतिसम्मको यात्रा
‘वशुधैव कुटुम्बकम्’ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्लोगन हो यो । महाशिवरात्रिको माहोल चलिरहँदा पवित्र धार्मिक स्थल पशुपति क्षेत्रमा आएकाहरुलाई यही श्लोगनले पनि अपनत्व अनुभव गराएका बताउँछन् केही साधकहरु । यतिबेला नेपालका विभिन्न ठाउँहरु र भारतबाट समेत साधकहरुको आगमन बढ्ने क्रम जारी हो । त्यसैमध्येका एक हुन् चरणदास ।
उनलाई यो श्लोगनले धेरै मन छोएको उनी सुनाउँछन् । अयोध्याको एक शैव अखडाबाट शिवरात्रिका लागि पशुपति आएका चरण दास मंगलबारमात्रै काठमाडौं आइपुगेका हुन् । उनीसँगै ५ जनाको टोली दुई दिन लगाएर काठमाडौं आएको हो । श्रीरामको जन्मभूमिमा बसोबास गर्ने शिवभक्त दासको अयोध्यादेखि काठमाडौंसम्मको यो पहिलो धार्मिक यात्रा हो । उनी शिवरात्रि सम्पन्न भएपछि मुक्तिनाथसम्म पुग्ने तयारीमा छन् । तर, धेरै चिसो हुन्छ भन्ने सुनेकोले जाने वा नजाने भन्ने विषयमा यकीन नभएको उनी सुनाउँछन् ।
उनी भन्छन् ‘अबको केहीदिन यही पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा समय बित्नेछ । त्यतिन्जेलसम्मको लागि नजिकै रहेको आश्रममा बन्दोबस्त गरिएको छ । जति अट्छौ त्यतै सुत्छौं, नअट्नेहरु त्यहीँ रहेका सानातिना मन्दिरहरुको ओतलागेर सुत्ने तयारीमा छन् ।’
भोक र लोभ त्यागेका र त्याग्न नसकेकाहरुको मिश्रण
सन्यासी एवं अघोरीहरु आफैंमा भोक लोभ, मोहबाट मुक्त हुनुपर्ने हो । तर, पशुपतिमा आउने सबै साधकहरुमा यो गुण देखिँदैन । त्यसैमध्ये पनि केही भने वास्तविक साधकहरु पनि त्यहाँ भेटिन्छ । भेट्न जाँदा उनीहरु एकदुई प्रश्नको उत्तर दिन्छन्, त्यसपछि आफ्नो ध्यान भंग नगर्नको लागि चेतावनी दिएर आफ्नै सुरमा लाग्छन् । केही साधुहरु भने साधुको भेषमा व्यापारको खोजीमा भेटिन्छन् ।
आफू बृन्दावनबाट आएको बताउने एक साधुले झण्डै ५ किलोजति गाँजा घाममा सुकाइरहेका थिए । त्यो उनीहरुको हरेक वर्षको व्यापारको सिलसिला हो । कुराकानीको क्रममा उनी भन्छन् अघिल्लो वर्ष भारु २४ हजार रुपैयाँको गाँजाको व्यापार गरेका थियौं ।
यो वर्ष अघिल्लो वर्षकोभन्दा अलि धेरै छ । उनी ५ जना साधुहरुको साथमा पशुपति आएका हुन् । उनी शिवरात्रि शिवको स्तुतिसँगै गाँजाको व्यापारको लागि समेत आएको पनि बताउँछन् ।
फागुन ९ गते शुक्रबार शिवरात्रीको साँझ पशुपतिमा विशेष रमझम हुने गर्छ ।
पोखरामा गाईजात्रालाइ महोत्सव को रुपमा मनाउदै ।
Posted on ३१ श्रावण २०७६, शुक्रबार १४:०६ Author admin
पोखरा : पोखरामा परम्परागत सांस्कृतिक पर्व गाईजात्रा सुरु भएको छ। भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म आठ दिन यो पर्व मनाइन्छ। नेवा खल कास्कीको आह्वान तथा महेन्द्रपुल तायमचा समिती पोखराको आयोजनामा शुक्रबार देखि गाईजात्रा महोत्सव तथा तायमचा नृत्य प्रतियोगिता सुरु भएको हो। गाईजात्रा महोत्सवमा नेवारी सांस्कृतिक नृत्य, बाजा, तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भइरहेको छ। लाइभ कन्र्सटअन्र्तगत मौलिक बाजाका […]
जीबन र जगत स्वास्थ्य
शाकाहारी भोजन गर्ने व्यक्तिमा ‘मस्तिष्काघात’ को जोखिम बढी हुने ।
Posted on २० भाद्र २०७६, शुक्रबार १४:४३ Author admin
काठमाण्डौ । माछामासुरहित आहार गर्दा मुटुको रोग लाग्ने सम्भावना कम हुने भए पनि मस्तिष्काघातको जोखिम बढ्ने एउटा ठूलो अध्ययनले देखाएको छ। ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले गरेको अध्ययनमा ४८ हजार व्यक्तिलाई १८ वर्षसम्म हेरिएको थियो। प्रत्येक हजार मानिसहमध्ये मुटुको रोग लाग्ने शाकाहारीको सङ्ख्या मांसाहारीको भन्दा १० कम थियो। तर मस्तिष्काघात हुनेमध्ये शाकाहारीको सङ्ख्या […]